Ndị na -emepụta Kobelco | China Kobelco Ndị na -ebubata ya & ụlọ ọrụ
Caterpilliar Komatsu Hyundai Hitachi kobelco Volvo Excavator bọket bọket nkume.
Caterpilliar Komatsu Hyundai Hitachi kobelco Volvo Repcament excavator bọket rock bọket, yana akụrụngwa Q345B, ahaziri nha, dakọtara na eze Aili ika na ihe nkwụnye, onye na -egbutu akụkụ.Aili bụ bọket ọkachamara na mgbakwunye bọket na -arụpụta site na 1980. Ihe karịrị 3000 ihe na usoro, na -enye ndị mmekọ ọrụ kacha mma mgbe niile.
Bọketị CAT320 PC200 SK200 CAT312 CAT330 CAT336 bọket excavator nwere mgbakwunye ịwụ.
Bọket CAT320 PC200 SK200 CAT312 CAT330 CAT336 bọket excavator nwere mgbakwunye ịwụ, nwere ike dochie maka akara ụwa niile ama ama, dị ka Caterpilliar Komatsu Hyundai Hitachi kobelco Volvo Mgbanwe onye na -egwupụta bọket bọket nkume, yana Q345B akụrụngwa, nhaziri ahaziri, dakọtara na eze Aili ika na ihe nkwụnye. , akụkụ cutter.Aili bụ ọkachamara ọkachamara na bọket na mgbakwunye na -arụpụta site na 1980. Ihe karịrị 3000 ihe na usoro, na -enye ndị mmekọ ọrụ kacha mma mgbe niile.
SK200 YN69B00008F1 excavator ụdị bọket ezé n'ụdị ezé adịgboroja
SK200 YN69B00008F1 excavator ụdị ịwụ ezé ụdị adịgboroja, Aili ndụmọdụ adịgboroja ọhụrụ. A na -eji ire ọkụ na -ere ọkụ maka Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia maka Kobelco akwa akụrụngwa excavator. Dakọtara na SK200 nkwụnye YN61B01020P1 na 40CR mma dị mma na ndị na -ejigide ya. Emepụtara site na nrụpụta Aili, ụlọ nrụpụta GET nwere site na 1980.